Indlu ephindiweyo: Qhuba ukugcwala ngakumbi kunye nokuKhokelela kule nkonzo yokuNxibelelana neMithombo yeendaba yezeNtlalontle | Martech Zone
Amashishini, kubandakanya okwam, ahlala esenza umxholo omtsha kunye nomangalisayo kwiindawo zawo-kubandakanya iividiyo, ii-podcast kunye namanqaku. Ngelixa indalo imangalisa, kukho umjikelo wobomi omfutshane kuloo mxholo ngokuhamba kwexesha… ke ukubuyela ngokupheleleyo kutyalomali kumxholo wakho akukaze kufezekiswe.
Sesinye sezizathu zokuba ndityhale abathengi bethu ukuba bacinge ngakumbi malunga nokuphuhlisa ilayibrari yomxholo kunomsinga ongapheliyo wemveliso yomxholo. Kukho enye ingxaki kulwakhiwo lomxholo, nayo, nangona… asiguquki kwaye ukuphindaphinda umxholo ukuqhuba impendulo eyongezelelweyo ngamanye amajelo.
Xa sisebenza kunye nabaxumi, siya kuhlala sithatha iposti yebhlog eyaziwayo kwaye siyisebenze kwi-infographic, emva koko sibhale i-infographic kwiphepha elimhlophe, emva koko sibhale iphepha elimhlophe kwi-webinar… njalo njalo. Inkqubo isebenza ngokungummangaliso kuba sele siyazi ukuba umxholo uyathandwa… ke umngcipheko kunye neendleko zokuphinda uzibuyise ziyancitshiswa. Ungayichazanga eyokuba umxholo we-organic une-ROI enkulu kakhulu kunokufumana isikhokelo ngentengiso.
Kodwa… ukufumana ixesha kunye neetalente zokwenza kunye nokuphindisela kwakhona iiasethi ngumceli mngeni kwiqela ngalinye lentengiso. Khawufane ucinge ukuba ubunenkonzo onokuyila kwaye wandise umxholo wakho olungiselelwe amajelo eendaba ezentlalo yonke imihla yakho…
Indlu ephindiweyo yinkonzo eguqula ibhlog yakho esele ikho, ividiyo, okanye umxholo wepodcast uyilo lwesiko olulungiselelwe ukwabelana ngeTwitter, Facebook, Instagram, Youtube, kunye neLinkedIn.
Udityaniswe nabaqulunqi bomxholo abazinikeleyo, abagcini, kunye nabacwangcisi beendaba zosasazo ukuthumela ividiyo eyilelwe ngokwesiko kunye neevidiyo, iikowuti, imifanekiso, kunye nezithonjana ezifomathiweyo zokutya kwezentlalo, amabali kunye neYouTube. Iimpawu zeNdlu enenjongo:
Ukulungiselelwa - iiasethi zinenkcazo kunye nobungakanani obufanelekileyo kuwo onke amaqonga.
Ibhalwe -Umxholo kunye nomxholo wevidiyo uhlala uphawulwe ngeetemplate ekuvunyelwene ngazo ezibonakala zintle.
Ixabiso elimthebelele - Ixabiso elinye, inyanga nenyanga, lisetyenziswa ngokusekwe kumxholo ofuna ukubuyiselwa kwakhona kwaye uposwe.
Ukuhanjiswa okukhawulezayo - ngenise isicelo ngentsimbi yesi-5 ngokuhlwa kwaye ufumane iasethi kusasa!
Ngena, qalisa itikiti, unike isiQhekezi sakho soMxholo ulwazi oluthile, ikhonkco kwividiyo / kwisandi sakho okanye ukuya kuthi ga kumagama ali-100 okubhaliweyo kwisithuba sebhlog, kunye netada-ungafumana ukuya kuthi ga kwi-asethi ezili-9 ngesicelo ngasinye!
Cwangcisa iDemo yeNdlu eDemo
Imizekelo yeNdlu ephindiweyo
Nazi ezinye imizekelo emikhulu yenkonzo yabo ephuhla njani umxholo oqaqambileyo, uphawu, kunye nolungisiweyo… kubandakanya iimemo zevidiyo, ii-audiograms, kunye nezicatshulwa zemifanekiso:
Yakhelwe kumxholo wevidiyo okhoyo, Indlu ephindiweyo yongeza isihloko kunye neencwadana ezinokufundwa (kulungile kuba uninzi lwabantu ivolumu yabo ithulisiwe):
Eyilwe kwisicatshulwa esivela kwiposti yebhlog okanye inqaku, ezi vidiyo zimnandi ekuqhubeni ukuthengisa kwaye zikhokelela kwimithombo yeendaba zentlalo ebuyela kwindawo yakho.
Ii-audiograms ziividiyo eziveliswa kwisicatshulwa esivela kwipodcast yakho ukuqhuba abantu ukuba babhalise kwaye bamamele.
Yila umfanekiso omkhulu usebenzisa isicatshulwa kwinqaku lakho, ividiyo, okanye ipodcast ukuqhuba ulwazi olongezelelekileyo ngamajelo eendaba ezentlalo.
Abaxhasi be Indlu ephindiweyo babona ukwanda kwiseshoni ye-138% kwaye bakhokelela ngama-300%… ngaphandle kokuchitha idola kwintengiso. Konke ngokubuyisela umxholo wakho okhoyo kunye nokwabelana nawo kumajelo eendaba ezentlalo ngobuchule.
Qalisa ngeNdlu enenjongo
Ukubhengezwa: Ndililungu le Indlu ephindiweyo.
tags: i-audiogramii-audiogramsFacebookIntengiso ye-Facebookiikowuti zomfanekisoinstagramyokuthengisaIividiyo ze-instagramLinkedInukuthengisa okuhlanganisiweyoukuphindaphindaumxholo ophindaphindiweyoIndlu ebuyayoUmxholo wemidiya yoluntuimifanekiso yemidiya yoluntuiividiyo zemidiya yoluntuTwitterUkuthengisa nge-TwitterIingcaciso zeVidiyoyoutubeUkuthengisa kwi-youtube